Qoorqoor oo baaq deg-deg ah u diray Shacabka reer Galmudug | HalQaran.com
Home Warar Cusub Qoorqoor oo baaq deg-deg ah u diray Shacabka reer Galmudug
Qoorqoor oo baaq deg-deg ah u diray Shacabka reer Galmudug
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa Shacabka Galmudug ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah Ururka Al-Shabaab oo uu sheegay inay dhibaato ku hayaan deegaanno ka mid ah maamulka.
Qoorqoor ayaa sheegay in guulo muhiim ah in laga gaaray dagaallo Al-Shabaab iyo Shacab ku dhexmaray deegaannada Shabeellow iyo Bacaadweyne ee Mudug.
Madaxweynaha Galmudug ayaa xusay, in Al-Shabaab maalmihii lasoo dhaafay ay dhaq-dhaqaaqyo ka billaabeen deegaanno ka mid ah Galmudug, loona baahan yahay in laga shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa.
Ugu dambeyn, Qoorqoor ayaa sheegay, in maamulka Galmudug dhawaan ay qaadi doonto howlgal weyn oo Al-Shabaab looga saarayo deegaannada ay kaga sugan yihiin Galmudug.
Ururka Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya degmooyinka Xarardheere, Ceeldheer iyo Ceelbuur oo muhiim u ah maamulka Galmudug.
baaq deg deg
la dagaalanka Al Shabaab
shacabka reer Galmudug